Louis Van Gaal oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubadda cagta & Shaqada uu qaban doono %
Louis Van Gaal oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubadda cagta & Shaqada uu qaban doono
By Ramzi Yare	 On Mar 12, 2019
Macalinkii hore ee kooxda Manchester United, Louis Van Gaal ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay kubadda cagta.
67-sano jirkaan, ayaa ku guuleystay FA Cup-ka labadii xilli ciyaareed ee uu joogay garoonka Old Trafford kaddib markii uu yimid sanadkii 2014-kii ayaa ku dhawaaqay inuu isaga tagay gabi ahaanba kubadda cagta isagoo lahadlayey TV laga leeyahay dalka Holland.
Van Gaal ayaa ku guuleystay Koobab dhowr ah oo uu ku jiro Champions League oo uu sanadkii 1995-kii la qaaday Ajax, sidoo kale waxa uu labo horyaalka La Ligaha Spain ah kula guuleystay Barcelona, isagoo horyaalka Bundesliga Jarmalkana la qaaday kooxda Bayern Munich.
Sidoo kale macallin Van Gaal ayaa waqti ku qaatay hoggaaminta xulka qaranka Holland, waxaana uu geeyey xulka kaalinta saddexaad ee Koobkii Adduunka sanadkii 2014-kii.
“Hadda waxaan ahay qof hawlgab ah, waxaan hammuun u qabaa inaan noqdo Agaasime farsamo ama Falanqeeye Telefishan,” Van Gaal ayaa sidaas u sheegay barnaamijka VTBL ee ka baxa TV-ga laga leeyahay dalka Holland.
“Xaaskeyga Truus ayaa shaqada iga ogolaatay 22 sanno ka hor, waana ay i raacaysay markii aan dibadda u baxo, waxaan u sheegay inaan iska joojin lahaa tababarennimada markii aan 55-sano jirsaday, halkii aan sii socon lahaa illaa 65-sano.
“Waxa ay xaq u leedahay inaan noloshayda la joogo aniga oo ka baxsan kubadda cagta, waxaan dhihi karaa way ku faraxsan tahay, waxaan qabaa inaan ka shaqeyn lahaa Agaasime farsamo.” ayuu hadalkiisa ku daray Van Gaal.
Dhinaca kale Van Gaal ayaa ahaa ninkii u gacan geliyey Marcus Rashford oo 18-sano jir ah inuu kulankiisii ugu horreeyey u safto kooxda Manchester United, xiddiga reer England ayaana u mahadceliyey macallinkiisii hore.
Rashford ayaa tababarihiisii hore ee Van Gaal mahadcelin hawada u mariyey kaddib qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka: “Waad ku mahadsan tahay furitaanka albaabka iyo kalsoonidaada aniga. Ku raaxayso maamule howl-gabkaaga.
Thank you for opening the door & trusting in me. Enjoy retirement boss
Rasmi:Real Madrid ayaa Xaqiijisay in uu Zidane ku soo laabtay shaqada tababaranimo ee Real Madrid
Hordhaca: Heegan Vs Jeenyo- Wax Waliba Aad Ugu Baahan Tahay Kulankan Qeybta Ka ah Horyaalka Somali Premier League